Kedu ihe na-eme biya biya dị ka Radler? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Nkọwa Radler - nkọwa zuru ezu
Nkọwa Radler - nkọwa zuru ezu
Kedu ihe na-eme biya biya dị ka Radler?
Omenala GermanIgwe igweagwakọta akụkụ hà ìhè-acha, hoppybiyadị ka pilsner na citrus soda (nke a na-akpọkarị “lemonade” na Europe, mana ọ bụ n’ezie flawa lemon). Okpukpo ahu bu ihe nkpuru di iche iche nke uto na ihe nkpuru, ya na nkpuru obi ilu.Jul 20 2017 Nọvemba
elu igwe kwụ otu ebe 2020
Lelee ebe a na-a beerụ biya USA nke a bụ izu m bụ Krista Teeny Abụ m Patrick Wolf biya a na-egosipụta taa bụ Summerbeers 101 bụ ginger-lemon Radlerfrom Boulevard Brewing tọrọ ntọala innineteen 89 Ebe a na-eme biya ahụ dị na Kansas City Missouri na biya a nwere ntụgharị nke 4.1 pasent ọ bụ oge ọkọchị na-adị ka ị maara, achọpụtara m na oge ikpeazụ anyị gbara usoro ya ọ dị ka ihu igwe dị n'èzí, ma ugbu a ọ ga-abụ nwa oge, oge eruola maka ụfọdụ biya beers ee ị maara , nwere ezigbo echiche, magazin ahụ ka tọhapụrụ ndị na-a summerụ ha n'oge ọkọchị.Ma na-akụkwa ọka donuts na shanties, n'ihi ya, anyị chọrọ iweghachi echiche anyị banyere ihe anyị na-eche mgbe niile mgbe ịchọrọ ịgụ isiokwu zuru ezu site na akwụkwọ nyocha ebe a. na ihe ndị dị n'okpuru ebe a, ị nwere ike ịchọta njikọ ahụ maka ndenye ọpụpụ n'ezie, mana ị maara ụmụ okoro ndị a Kickass wee lelee ha Rattlers ntakịrị oge a ma ama mara mma maka oge ị maara ihe ọzọ ị nyere m thedowndown chris yabụ m na-ekwu m n'aka peopl m ga - abata n'ụlọ ahịa na - ajụ gị ọtụtụ ihe dị iche iche mana m ga - amata na ịrụ ọrụ na ọchị ọchị akụkụ ahụ nke ọtụtụ mmadụ na - aghọtaghị bụ na e mepụtara mkpịsị mkpịsị uhie na Germany maka ndị na - agba ịnyịnya ígwè. igwe kwụ otu ebe na enwere onye na-elekọta ebe obibi n'ehihie Sọnde na njedebe nke izu, na ngwụsị izu na-arụsi ọrụ ike ma nwee ọtụtụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-agagharị n'ụbọchị dị mma ma ha bilitere otu a.
Anyi na ekwu okwu dika ndi mmadu 50 nke igwe kwụ otu ebe choro i andu ma nwee biya ma ya enweghi biya zuru oke iji gbue ha nile o were lemon lime soda were gwoo ya na biya ya ka o mee ka ndi na-agba ugbo elu nwee obi uto n'ihi ha nwetara ihe Nwere ìhè na-enye ume ọhụrụ na obere obere mmanya na usu-enwe obi ụtọ n'ihi na ọ t on a ajị agba ụmụ nwoke na-agba ọsọ na-esote ebe na rattler mụrụ Anna Rocker bụ a biya na ga-a bit nke ihe ọ juiceụ fruitụ mkpụrụ osisi na- -eme ka ọ a bit carbonated ka uit ihe ọ juiceụ andụ na ọ ga-enye biya obere mmanya na-aba n'anya, ihe n'ezie dị ukwuu n'ihi na n'oge okpomọkụ n'ihi na ị nwere ike n'ụzọ ụfọdụ na-a drinkụ ya, ị pụrụ ịnụ ụtọ niile 19 oghere ma ọ bụ 18 oghere ma ka na-echeta ihe ị nwetara iri na itoolu Ee, ịmara, ị nwere ụbọchị zuru oke n'ụsọ osimiri ma emela onwe gị ihe ọ bụla n'ime mmiri. Emere m picnic anyị n'oge okpomọkụ afọ asaa gara aga, ya mere rattler, dị ka ya, ka enwere onwe ya na Pierre, topias dị ezigbo mma ee enwere naanị otu boulevard na ngwakọta ngwakọta nke 12 na-akpọ usoro ntanetị ha, n'ihi na ha na-ekwu abụọ dị iche iche. ndị na-a roomụ bekee na mkpọ a n'ezie ha nwere lemon-ginger ugo nke abụọ bụ ESB, nke dịkwa mma nke ọma, ee ee, site na biya biya na ị maara, chaị, ginger ahụ na-agbapụ, ọ na-a aụ ma m tinye ya, ọ bụ lemony? n'ihu na oseose na mgbe ahụ ị a oseose ginger na njedebe, otú ahụ ka m n'ezie na-amụta a obere na azụ nri obere ose, a ginger Ọ dị ezigbo mma na-enye ume ọhụrụ abụghị na isi ihe na ihe m chere bụ nnọọ ewu ewu na anyi ka anyi rere biya a n'ihi na o bu nkpuru obere nkpuru, o di obere oge na udiri oku a na udi ihe onunu dika 12 ngwugwu ndi na erere gi ya na ulo ahia wow yeah so i bia ileta anyi abuo n’oge a n’afọ. Echere m na anyị kwesịrị ịhapụ ha ka ha nwee ụfọdụ ihe ịma aka nke ire osikapa a, nke ọma, ee? O doro anya na ọ bụ ezigbo ọrụ na-arụ ọrụ ebe m chọrọ ka ị gbalịa, gbalịa ya maka onwe gị ma hụ ihe ị chere ma ọ bụ site na ndị enyi anyị nye ndị enyi anyị ebe a na Clams na NewUlm Minnesota na Shell-Shocked Grapefruit Rattler, ya mere, a bụ ọrụ atọ tabloid si Poland na shei- ụlọ ọhụrụ wụrụ m akpata oyi mgbe m na-eme mgbanwe pụrụ iche na ndị na-eme mkpọtụ, dịka ya ka m ga-a toụ ka m ga-agwa gị onye na-agba egwu amaara m na enyere m gị ton nke crapon facebook ma ị bịara na usoro a. ebe niile Eze, afụ ọnụ gị, m nyere gị ihe nzuzu, ọ bụ ezigbo ihe ọ juiceụ juiceụ, ọ bụ ya mere na mgbe anyị lara, anyị ga-a drinkụ
Radler bụ okwu?
Igwe igwebụ asụsụ Bavariaokwumaka ndị na-agba ịnyịnya ígwè (“ndị na-agba ígwè”).
Ehee, kedụ ụdị cola niile unu nwere? Ọ nọ n'èzí ma nwee njiri mara mma. Nnọọ. Echere m na ọ nwere ike ịbịa ma ọ ga-abịa.
Anaghị m eme nke ahụ. Damn nke a bụ nnukwu! Oh Chineke m na nke a bụ ihe ọchị karịa ihe ọ bụla. Hey ndị enyi ekele maka isoro m na-akpagharị ọzọ taa! Enwere m Kristen na Tipsy Yak ma m na-a drinkingụ shandy taa bụ onye na-agwakọta lemonade na biya ebe a ma na-atọ ụtọ na udu mmiri.
Nweta ihe magburu onwe ya ma zute m ebe a. Odi mma, m si njem na Texas laghachi ebe m si bia, ma oburu na unu amaghi m.
Ya mere, ejiri m ihe dị ka otu ọnwa na Texas hụrụ ndị enyi m na ndị ezinụlọ m ma n'ezie na-ege ndị enyi m na ndị ezinụlọ m ntị. Otutu n’ime unu ajukwala m n’oge gara aga, ma n’oge na-adighi anya, mgbe m laghachitere, gbasara ihe ederede Texan ka ndi Texans si ekwu okwu, okwu Texan, ihe dika.
Ọ dị m nwute imechu gị ihu, mana enweghị m olu asụsụ Texas obodo m si, isi obodo Texas, Austin, anyị enweghị ngwoolu ebe ahụ mana ihe anyị ka nwere okwu Texan.
Taa m kere ndepụta nke 10 okwu mkpa ka ị mara iji ghọta Texan n'ihi na ị. Ya mere ka anyi bido! Nọmba 1 bụ okwu kachasị mkpa ị kwesịrị ịma mgbe ị na-agwa Texan okwu na ọ bụ ya niile. Ọ pụtara na unu niile na a tụkọtara n'otu okwu unu niile dịka ọ bụghị, ọ bụghị unu niile niile.
Y'alljust pụtara otu ndị mmadụ. Kedu mgbe unu niile na-abịa? Unu a na agakwa? Yabụ na ọ bụ naanị mgbe enwere karịa otu onye anyị ji ha niile.
Anyị chere na ọ dị mfe
Ahụrụ m unu n'anya, a na m eji ya oge niile. Nọmba 2, nọmba 2 bụ obere ejiji ochie
Echere m na agaghị etinye ha ebe a mana ihe mere m ji kpebie itinye ha ebe a bụ n'ihi na papa m kwuru ya na mgbe ọ na - eche na ọ dị oke mma yabụ etinye m ebe a nọmba 2 bụ okwu.
Howdy bụ Texan maka: Kedu ka ị mere? Nnọọ. Kedu ka ị mere, ọ bụ ụlọ akwụkwọ ochie ochie na England, ọ dịghị onye na-ekwu na ọzọ
Howdy bụ ụlọ akwụkwọ ochie na Texas, mana ụfọdụ ndị ka na-ekwu ya. Nọmba 3 edozi. Fixin 'pụtara n'ụzọ siri ike.
Anyị na-eji ya dị ka nke a
Ekpebisiri m ike ịga. Adị m njikere ịga, aga m aga
Ekpebisiri m ike
Ekpebisiri m ike ịga. Nọmba 4, nọmba 4 abụghị okwu ahụ. Ejikọtaghị okwu abụọ ọzọ ọnụ: ọ bụghị abụghị.
Achọghị m. Agaghị m. Ọ naghị abịa.
Ọ naghị abịa. Anaghị ada ụda nke ọma ọ nwere ike ịda ụda obere mmụta mgbe ndị Texans na-ejikarị ya eme ihe, ha na-egwu egwu.
Ọ bụ okwu a na-eji dị ka egwuregwu ma ọ bụ karịa ụbọchị ndị a mgbe ị na-agba mbọ ịdị ntakịrị karịa ịkọwa ya nke ọma. Texans n'ezie nwere ezigbo ụtọ asụsụ, kwere ya ma ọ bụ. Nọmba nke 5 bụ n'ezie nuff.
Nchekwa 'nuff ma ọ pụtara nchekwa zuru oke.
tubeless igwe kwụ otu ebe
Na anyị na-eji ya ịpụta ihe dịka, na njedebe ma ọ bụ na ọ tụgharịa ihe dị ka nke ahụ.
Dịka ọmụmaatụ, echeghị m na ọ na-abịa, mana ọ doro anya na ọ bịara. Echere m na m hapụrụ ya ebe ahụ ma jide n'aka, ọ bụ. Nọmba 6 apụla.
Nile, na anyi jiri okwu ato a putara mgbe ihe di elu ma obu karie. Iji maa atụ, ihe nkiri a mere ihe ọchị dịka mmadụ niile nọ ebe ahụ. Ọ bụ n'ezie, n'ezie na-akpa ọchị.
Aga m agbali izute gị n'izu a, mana enwere m oke karịa ịkụ ya niile. Nọmba nke 7 bụ okwu ahụ kwesịrị ekwesị. Hissing spa
Hissing spasm dị ka oke iwe mgbe iwe were gị nke ukwuu.
Hissy sitere na okwu hysterical solike, nchikota nke hysteria na ochie British English na Texas, ihe kwesiri ya.
Ee, ọ dị mma, ọ na-ewe iwe ma na-abanye n'ihe kwesịrị ekwesị. Anyị na-eji ya ọtụtụ ụmụaka ị maara, mgbe ụmụaka malitere ịkwa ákwá na ịzọ ụkwụ ha ma dinara ala ma eleghị anya ha ga-ada n'ala nke ahụ bụ mkpọtụ.
Okwu na-esote bụ Coke ị maraworị, dị ka Coca-Cola.
Ma na Texan, coke pụtara soda niile. Nke a nwere ike ịgbagwoju anya. Ya mere, ị ga-aga ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ wee lee nwanyị na-elekọta nwanyị anya wee sị gị ụdị cola ọ bụla unu nwere? Ọ ga-asị, ee, anyị nwere Sprite, Dr.
Ose, Cola, Diet Coke ma ị dị mma
Aga m ewere Dr. Ya mere ị na-ajụ maka Coke na otu Coke.
Okwu na-esote bụ dang. Na dang bu ihe eji dochie anya okwu damn ma obu ya puru ibu ihe efu.
Lee ka ọ si dị ukwuu! Ma ọ bụ na enweghị m ike ịhụ ihe a jọgburu onwe ya. N’ikpe azu obughi okwu, okwu a nnukwu ol ’... big ol’.
Ọ dị mkpụmkpụ maka Big Old ma ọ nweghị ihe jikọrọ ya na agadi.
Big ol pụtara nanị nnukwu n'ezie nnukwu.
Dika o nwere nnukwu ulo ochie o nwekwara nnukwu nsogbu n'isi ya.
Odi ndi enyi nke a ka m nwere maka unu taa.
Daalụ maka ịnọnyere m taa ma mụta ụfọdụ Texan laghachi ma leta m oge ọzọ ma nwee ọmarịcha ụbọchị! Ekele :)
ọcha nduku oriri na-edozi
Gịnị kpatara ha ji akpọ ya Radler?
Radler bụiheahanke ihe ọ drinkụ drinkụ na-enweta yaahasite n'otu okwu ahụ pụtara cyclist na German. Onye nwe amamịghe Franz Xaver Kugler gwakọtara ọkara biya gbara ọchịchịrị na ọkara lemon soda wee mepụta mmanya na-enye ume ọhụrụ, obere mmanya na-egbu egbu nke ọ kpọrọ aha ndị ọgba ịnyịnya (Igwe igwe).
Ma nke mbụ, nwoke na-a drinksụ ihe ọ energyụ drinksụ ike kwa ụbọchị na-egosi ihe mere ya, ebe Mandrake na-a drinksụ ihe ọ drinksụ drinksụ kwa ụbọchị ihe mere ya Dean Warren B bụ ọkachamara ọkachamara, iji kwado ahụ ya dị ịtụnanya, ọ ga-eri calorie 10,000 kwa ụbọchị ọtụtụ Nri ya nwere nnukwu kalori, abụba buru ibu, nri na-adịghị mma mgbe ọ nwụrụ. Ndị mmadụ chere na ọ bụ nri ya na-egbu ya, mana ọ ghọrọ ihe ọ energyụ energyụ ike Warren drinks are one of the most popular drinks in the market and a na-ere ha n’ụwa niile n’ihi na ha na-enye gị ike ngwangwa ma nyere gị aka ilekwasị anya. Ọtụtụ mmadụ na-a drinkụ ihe ọ drinksụ drinksụ ume ole na ole kwa izu, ụfọdụ na-enwe ọ oneụ n'otu ụbọchị Dean were ịhụnanya ya maka ihe ọ energyụ energyụ ike ọfụma site na ị drinkingụ ihe ọ energyụ twoụ ume abụọ n'otu awa mgbe ọ na-egosipụta na mbido.
Ihe ọ energyụ energyụ ike ahụ rụrụ ọrụ ebube maka Dean na mgbatị ahụ, ọ bụghị naanị na-enyere ya aka ilekwasị anya na mgbatị ya, kamakwa ịnweta ike ọ chọrọ mgbe ọ na-eme mgbatị ahụ. O di nwute, a chọpụtara na Dean na-arịa kansa. Fọdụ ndị chere na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngọzi ebe ọ nwere ike ịkwụsị omume ọjọọ ya niile.
Na mbụ ọ malitere iri nri dị mma ma hapụ ihe ọ drinksụ drinksụ ike mgbe ọ gwọchara ọgwụgwọ na etuto ya malitere ịda mbà wee pụọ mgbe ọ nụrụ na ọ malitere iri nri ngwa ngwa ọzọ na onye ọ bụla Na-a severalụ ọtụtụ mmanya mmanya otu ụbọchị n'ihi na ọ na-alaghachi na nke ochie ya omume. Ọ chọpụtara na o nwere kansa cancer. Na mbu, o cheghị na omume ọjọọ ya nwere ihe ọ bụla metụtara nchoputa kansa ya, mgbe ndị dọkịta gwara ya na omume ọjọọ ya na ị hisụ ihe ọ energyụ energyụ ike mebiri imeju ya ma mepụta mkpụrụ ndụ kansa, mgbe ahụ ọ matara na ọ bụ amụma ọjọọ ya. bụ maka.
Dean enweghị ike iti ọrịa cancer nke ugboro abụọ, ọ nwụrụ wee hapụ nwunye na nwa ya obi mgbawa mgbe ọ nwụrụ. Ọtụtụ ihe ọ energyụ drinksụ ike dị oke egwu nke na ha nwere niacin, nke amara na ọ ga-ebute ha nnukwu mmebi imeju, ọ nwedịrị ike ime ka imeju gị ghara ịda mba. Otu ihe ọ energyụ energyụ ike ọ canụ upụ nwere ike ịnwe ihe dị ka milligrams 40 nke niacin kwere ga-efu Dean ndụ ya Dean Nanị akụkọ dị mwute banyere ihe ọ energyụ energyụ ike Otu nwoke gara ụlọ ọgwụ kwenyere na ọ nwere flu ahụ mgbe ndị dọkịta nyochara ya. Ha chọpụtara na ọ nwere jaundice ma mara ihe ọ nwere abụghị ọrịa ọ na-arịa ịba ọcha n'anya, mbufụt nke imeju nke nwere ike ibute ọdịda imeju ma ọ bụ kansa, ndị dọkịta jụrụ ya ma ọ nọ na ezinụlọ nwere nsogbu imeju yana ọ agwaghị ha ihe ọ bụla, ma ọ gwaghị ha ihe ọ bụla, n'agbanyeghị na ọ atụọlarị ma ọ dịkarịa ala mmanya abụọ na-a drinksụ mmanya kwa ụbọchị ruo ọtụtụ afọ.
Ndị dọkịta enweghị ike igosi na oriri ya na-a drinkụ bụ n'ihi ihe ha chere na ọ bụkarịrị n'ihi na ha hụrụ nwanyị nwere ịba ọcha n'anya ma kweta ị Seụ Se kwa verale kwa ụbọchị ihe ọ energyụ energyụ ike ma ọ bụrụ na ị hụrụ ike ike gị ozi ọma bụ na ebe ahụ ndị ọzọ dị mma dị mma ka na-enye gị ume. nnukwu mmiri mmiri acoụ mmiri, ihe ọ thisụ drinkụ a abụghị naanị ihe na-enye ume ọhụrụ ma na-eme ka akpịrị ịkpọ nkụ gị kwụsị, ọ na-enwekwa shuga na-acha ọkụ na electrolytes nke na-enye gị nnukwu ume ma na-enye gị ume nkwalite ọzọ nnukwu ihe ọzọ bụ banana na wheatgrass smoothiesBananas dị elu na eriri, ma wusie ike na potassium, wheatgrass na-enyere aka iwulite mkpụrụ ndụ ọbara uhie, nke na-ahụ maka ibugharị oxygen site na ahụ gị maka ike a - Dụọ ihe ọ alternụativesụ ndị ọzọ bụ ihe okike ma ha nwere ị gbakwunye na ahụ gị ọ dịghị emerụ ahụ. Nke kachasị, ha ga-enye gị mmụba nke ike ị na-achọ mgbatị gị ma ọ bụ ụbọchị ọrụ gị.
Ọ bụrụ na ị na-a drinksụ ihe ọ energyụ energyụ ike ugboro ugboro, ihe kachasị njọ ị nwere ike ime bụ ibi na ịgọnahụ. Nke ahụ agaghị eme m omume, ndị a bụ ndị na-arịa ọrịa oge ọzọ ị gara ụlọ ahịa zụta onwe gị ihe ọ drinkụ drinkụ ike chọrọ iche banyere Dean na ihe mgbu niile ọ gabigara tupu ọ nwụọ. Cheekwa echiche banyere nwunye ya na nwa ya nwanyị, bụ ndị na-eru uju ọnwụ ya ma ọ bụrụ na akụkọ ya enweghị echiche zuru oke, nwoke ahụ batara n'ụlọ ọgwụ na-ekwenye na ya nwere ọrịa ahụ, ma ọ bụ nwanyị ahụ ji afọ abụọ ike -Nrankụ mmanya na-a aụ kwa ụbọchị, ndị a ndị mmadụ tara ahụhụ na-enweghị isi naanị maka iburu m ngwa ngwa.
Nchịkwa nri na ọgwụ ọjọọ adịghị njọ ugbu a oriri na ọ Energyụ Energyụ na-a Energyụ ike na United States E nwere ọtụtụ ndị kwenyere na ọ bụ naanị oge tupu ha denye aha ndị ọzọ
Kedu ihe bụ Radler ale?
N'ihi na ọ bụ 104 n'okporo ámá taa ebe anyị nọ na ala mbụ nke ụlọ anyị ọ bụ naanị 80 degrees na ebe a ọ dị ezigbo mma ebe a Ọ bụghị na anyị nọ n'ụlọ Emechara m ịkwọ ụgbọala maka ụbọchị ahụ, ọ bụ oge ịpụ ụmụnne nwoke anọ ndị a azụrụ m ụbọchị abụọ nke dị mma, sagenti m na tebụl, m na-a drinkụ, ọ masịrị m ngosi ọnwa ka ha gbalịrị ụbọchị ole na ole gara aga, ị gaghị ahụ ọkwa a maka ịgagharị Ha enweghị nke ọ bụla, yabụ gị ga-ahụ, ya mere na nke a bụ n'ezie ìhè na agba, ma ọ bụrụ na Khloe bụ ubé mma ọkara Bitburger dị ka m na-eche ihe niile dị ka 2,5% ee nke ahụ bụ 2,5% na-ekwu na ọ bụ ọkara na ọkara ka anyị hụ otú nke ukwuu-amị n'ọnwa na-egosi ndụ na Romayep doro anya na a ga-ewepụ lemon na-esite na ụdị ụdị yabasị cuddle Bobo akara Africa 'jaa h enwere m oge ugbu a, m ga-eme nyocha ndị a niile taa, echere m na enwere ike ị ga - abụ anọ ọzọ. nke ọ bụla, ọ dị ka ezigbo ntụnyere azụ n'akụkụ kama iji otu mgbe m ga-enweta ha bas Ed na anyị otu izu 3 m ga-echeta nke ọzọ ma dabere na mmetụta m na nke ahụ siri ike, anyị ga-emeghe oge ọzọ maka ọnụọgụ abụọ nke Rattler, ya bụ na Chrom Bakr Rattler kwuru pasent abụọ na ọkara ọzọ, pacenti iri ise, pasent iri ise bụ ịchị lemon, ma ọ bụrụ na anyị dị otu a, na ọ bụ igbe Igbe bụ na ọ bụrụ na anyị mee ha ọkara na ọkara, ị chere na ha achọghị ịma gbasara ihe, yabụ na nke a ga-emetụta gị obere na-anakọta na bitburger nwere otu esi ísì si laminate Roma a bit dị iche na m na na na otú ị dị nnọọ wee a bit nke biya ma ọ bụ nanị wee na e nwere ezi Steve, gịnị ka anyị nwere ugbu a na-akọwa a imecha a bit bubbly na ọnụ na-eche ọ dị ntakịrị tingly n na-etinye ntakịrị carbonic acid na ire, ị gaghị enweta laminate aftertaste na nke a, ya mere na-ekele na ọ bụ obere nhicha, na-ehicha ma otu mkpụrụ mekwara ntakịrị ụtọ, m nzọ ọkara dị elu atọ na nke a Lee, anyị ga-eme ihu enyi ihu megide Moonshow, mana ọ ga-atọ m ụtọ na anyị ga-ahụ gị maka nke atọ n'oge na-adịghị anya ma ọ bụ mgbe e mesịrị dị njikere maka ọnụọgụ nke atọ nke ọgụ Rattler nke ọzọ bụ Henninggear-Radler 2.5% kwụsịrị ma ọ bụrụ na ịnwe ego biya ma ọ bụrụ na ịnwere ike ịkụ nzọ na 500, ọ ga-arụ ọrụ.
Were ogologo oge ezumike n'etiti biya, n'ezie ị hụghị nke ahụ, n'ihi na maka Pausenokay, yabụ ọ dị ka ọ dị n'etiti nke mbụ na nke atọ, na nke abụọ na agba agba ọkụ karịa nke abụọ, mana ntakịrị ọchịchịrị karịa nke mbụ Ọ dị ka Lima chọrọ ime ụlọ ebe ahụ, mana ọ dị ntakịrị n'ihu, naanị m na-amata ọdịiche nke mesirow rightah, yabụ nke ahụ ga-adịtụ njọ Ọ na-adị m mma maka ịkwụsị, yabụ maka mụ onwe m mere nke ahụ, ọtụtụ oge maka oge ọkọchị m ga - ekwu ala atọ na m nọ na 25, ee ee nọrọ na-ege ntị maka ọnụọgụ nke anọ, ọ dị mma na anyị nwetara nnukwu igwe ojii ochie nke na - anụ anyanwụ na - ekpuchi site n'ọdịda anyanwụ n'agbanyeghị na ọ na - apụ apụ ugbu a, ọ na - eme ka ọ dị ntakịrị ntakịrị ogo ma enwere ikuku dị mma n'ihi ígwé ojii ahụ ka ọ wee ghara ịdị ka ọ dị ebe a na-ekpo ọkụ yabụ nke ikpeazụ na nke ikpeazụ na nke ikpeazụ bụ ndị na-eri schnapps ugbu a ha nwekwara shandy na-ejighị n'aka na m derela nyocha banyere mgbe m hụrụ nke a? Ha nwere ihe okike m chere na m ga-ahụ etu ihe dị iche karịa nke ọzọ 2.5% ọkara ọgwụ na ọkara ha ọ na-adọta n'ime lemonade bụ n'ezie agba ọkụ, n'ezie ị nwere ihe ọadeụ lemonụ lemonade ahụ nke na-agbatị Brian na Obere nri abalị nke abụọ bụ nke kacha mma oyi na-atụkarị nwere ihu iji jide n'aka na wowaber na-agbanye n'igwe ojii ugbu a oseothers a 9 m ga-enye nke a izu 3 mana ụbọchị anwụ dị ọkụ dịka ha enweghị otu Nsogbu na ịmecha nke a otu enwere m obi ụtọ ile anya na nyocha anọ siri ike Cheersladys na Gentlemen ebe a maka biya mara mma m bụ Oge Ezumike ma ọ bụrụ na ịnwalebeghị ya na Germany Ugbu a, gbalịa ndị nke nọkọrịtara maka ndị na-ere Chrome, ma ọ bụrụ na ọ masịrị gị gbara ụka karịa ndị dị n'ihu ya, ị nwere ntakịrị nke sourto, nke a bụ otu maka gị Cheers
gịnị mere zinc ji enyere oyi aka
Nwere ike ị drunkụbiga mmanya ókè na Radler?
12. AIgwe igwe(ihu ọma) enweghị mmanya nanwere ikeịbụdrunkụbiga mmanya ókèn'oge ọ bụla. AIgwe igwe(ọkara biya / ọkara lemonade) kwuru na ọ ga-abụotunke ọ drinksụ drinksụ ndị kasị enye ume ọhụrụ.June 3. 2021
Nye na-a Radụ Radler?
Igwe igwe.Igwe igwe(German maka 'onye na-agba ígwè') nwere ogologo akụkọ ihe mere eme na mpaghara ndị na-asụ German. Ọ na-ejikọkarị 50:50 ngwakọta nke biya na lemon flavored soda dị ka Sprite.
What is ịnyịnya ibu in English?
aha, noun. onye na-agba ịnyịnya okirikiri.
Kedu ihe dị iche n'etiti shandy na Radler?
Otú ọ dị, okwu ahụshandydị ntakịrị karịa ma nwee ike ịgụnye ginger ale, ginger beer, apụl, mkpụrụ osisi grape ma ọ bụ ihe ọ orangeụ orangeụ oroma, ebe ndị radlers na-ekwukarị ihe mgbakwunye citrusy dịka lemonade na lemon-lime ma ọ bụ mkpụrụ vaịn.Ọnwa asaa 17. 2015 g.
Can nwere ike ị drunkụ mmanya na-egbu Stiegl Radler?
N'ihi na,gịlee, aonye na-agba ígwèdị nnọọ oberebiya. N'agbanyeghị nke ahụ,Stiegl sidị ụtọ, ọ dịkwa mmagan'eziemee ka ị drunkụbiga mmanya ókè(ọ bụrụ na ị drinkụọ, dị ka, 40 n'ime ha).June 20. 2014
Nwere Ike Drunkụbiga Mmanya Obi?
Ala mmanya dị ntakịrị na otuO'doulsmmanya na biya ndị ọzọ na-egbu egbu agaghịmee ka ị drunkụbiga mmanya ókè. Mgbe olegịụọ ihe ọ .ụ .ụO'doulsna ihe ọ otherụ drinksụ ndị ọzọ na-abaghị uru, ahụ gị ga-edozi obere mmanya na-aba n'anya ozugbo, ọ fọrọ nke nta n'otu oge ahụgịitụọ ya.Jul 15. Dec 2019
Nwere ike ị drunkụ mmanya na-aba n'anya 1 biya?
Ụfọdụ ndị mmadụdrunkụbiga mmanya ókènaotu biya, na ụfọdụ na-anụ ụtọ ya na ndụ ha niile na-enweghịị drunkụbiga mmanya ókè. Buru n’obi na ị dụbiga mmanya ókè na-eme ka mmadụ na-a alcoholụbiga mmanya ókè, o nwekwara ike ịkpatara ya ezigbo nsogbu. N'aka nke ọzọ, obere nkebiyaọ bara uru maka ahụike gị yananwere ikeEnyemakagịZuo ike.
Nso ke akpa aha Radler pụtara na German?
Radler bu okwu Bavaria maka Radfahrer (onye na-agba cyclist). E nwere ọtụtụ echiche banyere mmalite nke ihe ọ andụverageụ na aha ya, mana ha niile edepụtara na narị afọ nke iri na itoolu, mgbe ihe ọ theụ theụ ahụ ghọrọ mmiri na-agụ agụụ na-egbu egbu na mmanya na-aba n'anya karịa biya n'ime usoro ịgba ọsọ egwuregwu
Kedu ka ihe ọ Radụ Radụ Radler si nweta aha ya?
E nwere ọtụtụ echiche banyere mmalite nke ihe ọverageụverageụ na aha ya, mana ha niile edepụtara na narị afọ nke 19, mgbe ihe ọ theụ theụ ahụ ghọrọ mmiri na-agụ agụụ na-egbu egbu na mmanya na-aba n'anya karịa biya n'ime usoro mmegharị nke egwuregwu ịgba ọsọ n'etiti ndị ọrụ. .
Kedu ihe bụ akụkọ banyere ụdị Radler?
N'etinyeghi oge ọzọ, ka anyị drinkụọ n'akụkụ ọzọ n'usoro isiokwu anyị, 'Gịnị bụ Hel bụ Radler?' Akụkọ ihe mere eme n'azụ ụdị Radler dị ka zany dị ka ọkara biya - ọkara mkpụrụ soda concoction n'onwe ya.